अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसिय खेलमा नेपालको एतिहासिक जित - Nepal Cricket
नेपालले आफ्नो एतिहासिक पहिलो एक दिवशीय श्रृंखला बराबरी गर्न सफल भएको छ । पहिलो खेलमा ५५ रनले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा एक रनको रोमाञ्चक जित हात पार्यो । नेपालको यो अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवशीय खेलमा पहिलो जित हो ।
२१६ रनको योगफल रक्षा गर्ने क्रममा सन्दिप लामिछानेले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै तीन विकेट लिएपछि नेदरल्याण्डलाई २१५ रनमा रोक्न सफल भयो ।
अन्तिम दुई ओभरमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी र पारस खड्काले उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि रोमाञ्चक खेलमा नेपाल विजयी भएको थियो । अन्तिम १२ बलमा नेदरल्याण्डलाई जितका लागि नौ रनको आवस्यकता थियो । तर ४९औं ओभर बलिङ गरेको दिपेन्द्रले तीन रन दिए । अन्तिम बलमा नेदरल्याण्डलाई दुई रनको आवस्यकता थियो । तर सो बलमा पारसले फ्रेड क्लासेनलाई आउट गरेपछि नेपालले पहिलो जित हात पारेको हो ।
ब्याटिङ तर्फ सोमपाल कामीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि नेपालले ४८.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै २१६ रनको बलियो योगफल तयार पारेको थियो ।
Sompal Kami scored 61, his maiden half century against in ODI against Netherlands. Photo: Raman Shiwakoti
पहिला ब्याटिङ गर्ने क्रममा नेपालका लागि आठौं नम्बरमा ब्याटिङमा आएका अलराउण्डर सोमपाल कामीले उद्दार गरेका थिए । ८८ रन बनाउँदा ५ विकेट गुमाएको नेपाललाई पारस खड्का र सोमपाल कामीले प्रहार गरेको अर्धसतकले सम्मानजनक स्कोरमा पुर्याएको हो ।
सोमपालले ४६ बलमा ६१ रन बनाए । आठौं नम्बरमा क्रिजमा आएका सोमपालले ५ चौका र ३ छक्का प्रहार गरेका थिए । यसैगरी चौथो नम्बरमा ब्याटिङमा आएका कप्तान पारस खड्काले ५१ रनको अर्धसतकिय पारी खेले । पारसले २ छक्का तथा ६ चौका प्रहार गरेका थिए ।
Paras Khadka scored his maiden half-century against Netherlands in the second ODI. Photo: Raman Shiwakoti
यसैगरी पारस र दीपेन्द्रसिंह ऐरीको साझेदारीले स्कोरबोर्ड चलायमान बनिरहेका बेला ऐरी रन आउट हुन पुगे । १७ बल खेलेका ऐरी १९ रनमा आउट भएका थिए । यसैगरी आजै डेब्यु गरेका सुवास खकुरेल पनि १९ रनमा आउट भए । नेपालका लागि आरिफ शेखले १६ रन बनाउँदा ज्ञानेन्द्र मल्लले १३ रन बनाए । सन्दिप लामिछाने ८ रन बनाउँदा रोहित पौडेल ६ रन, ललित भण्डारी ४ तथा बसन्त रेग्मीले एक रन बनाए ।
२१७ रनको जवाफी लक्ष्य सहित मैदान आएको नेदरल्याण्ड्सले शुरुवात भने राम्रो गर्न सकेन । पहिलो ओभरको दोस्रो बलमै खाता नखोली स्टेफन मेब्रफलाई सोमपाल कामीले आउट गरे । ३० रन हुँदा बेन कुपरलाई ललित भण्डारीले आउट गरेका थिए ।
कुपर १९ रनमा आउट भएका थिए । तर त्यसपछि नेदरल्याण्ड्सलका लागि डेनियल ब्राक र वेस्ले बारेसीले ८४ रनको साझेदारी गरेका थिए । ब्राकलाई सन्दिप लामिछानेले आउट गर्दै लामो साझेदारी तोडेका थिए । सोही ओभरमै सन्दिपले बास डी लिडीलाई पनि आउट गर्दै नेपाललाई खेलमा फर्काएका थिए ।
अर्को एण्डबाट नेपाली बलरमाथि हाबी भएको वेस्ले वारेसीलाई दीपेन्द्रसिंह ऐरीले आउट गरेका थिए ।
नेदरल्याण्ड्सलाई अल आउट गर्ने क्रममा सन्दीप लामिछानेले ३, पारस खड्का र ललित भण्डारी २–२ विकेट लिए भने सोमपाल कामी, बसन्त रेग्मी र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले एक एक विकेट लिए ।